Fantsakan-tsoavaly fantsom-barotra - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Ny fantsona plastika fanamafisana plastika (FRP) dia mety sy mitahiry vokatra lafo ho an'ny fananganana sambo ho tombony toy ny eto ambany.
- Ny serivisy mandritra ny serivisy sy ny tombontsoa feno
- Sarany fikojakojana ambany: ny fantsom-bolo fibre sy fofona dia asongadin'ny fanoherana korosi, fanoherana ny abrasion ary fanoherana ny fandotoana, noho izany dia tsy mila atao ny fiarovana ny harafotina ny fiarovana maloto ary ny fikarakarana ny fitrandrahana, izay afaka mamonjy fitahirizana fikojakojana amin'ny 70%.
- Tsy fitondran-tena: fantson-tariby sy ny kitapo fibreibika dia tsy fitondran-tena, noho izany dia mety amin'ny tariby.
- Mora azo: azo averina sy amboarina mifototra amin'ny tsindry samihafa, ny tahan'ny mpandeha ary ny stiffness, sns.
- fanoherana ny abrasion: ampidiro amin'ny rano amin'ny slurry sy fasika amin'ny fantsona ny rano hanaovana ny fanadinana amin'ny abrasion. Ny halalin'ny fantsom-by vita amin'ny vy vita amin'ny tariby dia 0.52mm, raha ny fantsona fiberglass taorian'ny fitsaboana mafy dia 0.21mm ihany.
Ny rafi-pipa dia misy amina karazana diamondra mahazatra mahazatra mikorontana amin'ny 10 ka hatramin'ny 4000mm. Ny fantsona sy ny fantsom-by na lehibe kokoa dia azo atao rehefa fangatahana.
Ny fiberglass fantsona dia misy takela-bolan'ny ranon-tsirony madio, voaly fitaratra ary tsaramaso matevina / tady voan'ny «thermoplastic», rafi-pandrefesana ary sosona fisaka, miaraka amin'ny tsindry amin'ny famolavolana hatramin'ny 32 bar, ary max. hafanana 130 ℃ ho an'ny ranoka ary 170 ℃ ho an'ny entona.
Indraindray, mba hihaonan'ny tontolo mafana sy marefo, ny famolavolana Jrain ary manamboatra fantson-tongolo vita amin'ny laminate roa sy fittings, dia ilay thermoplastic liner sy fiberglass.
Ny takelaka thermoplastic mahazatra dia ahitana ny PVC, CPVC, PP, PE, PVDF, sns.
Ny fampifangaroana ny tanjaky ny FRP sy ny fanamboarana ny simika plastika dia manome ny mpanjifa manana safidy tsara kokoa amin'ny alika metaly lafo vidy sy vy vita amin'ny vy.
Ny fantsom-bolo sy fittings ho an'ny fanamboarana sambo dia afaka manome menatra amin'ny tontolo mangatsiaka ihany koa. Ny fampiasana ny insur polyurethane dia vita tamin'ny laminate FRP mba hiarovana ny insulte
Ny Jrain dia manolotra fantsona sy fitaovana entina hihaonan'ny fenitra nasionaly sy iraisam-pirenena marobe miankina amin'ny fangatahana ao anatin'izany ny DIN, ASTM, AWWA, BS, ISO sy ny maro hafa.
Nohavaozina Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP, hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Famolavola grating,